အောက်တိုဘာ 2017 – Myanmar Home & Decor Magazine Official Website
635402 Views so far
Month: အောက်တိုဘာ 2017
အောက်တိုဘာ 31, 2017 နေ့
ဗိသုကာတွေ ဘာကြောင့် ကဗျာရေး၊ စာရေးသလဲ၊ ဘာကြောင့် ပန်းချီဆွဲ၊ ပန်းပုထုသလဲ။
သူငယ်ချင်း . . . .။
တချို့အရာတွေကို ဗိသုကာဘာသာစကားနဲ့ ပြောလို့မရတာတွေရှိတယ်။
တချို့ကို အရောင်အနုအရင့်နဲ့ . . .
တချို့ကို မျဉ်းဖြောင့် မျဉ်းကွေး အထူအပါးနဲ့ . . .
တချို့ကို ပုုံသွင်းသဏ္ဍန်(သမာ )နဲ့
တချို့ကို ဗြုတ် (အနထအကမန ) အချော၊ အကြမ်းနဲ့ပြောမှရတယ်။
ကိုဆန်ညွှန့် (မောင်ညိုငယ်ကွယ်လွန်)ဟာ ဗိသုကာ၊ ကဗျာဆရာ၊ စကားပြေရေးဖွဲ့သူ။ မစန္ဒာ၊ စိန်ဂျွန်း-မာလေးတို့က ရသစကားပြေရေးဖွဲ့သူ၊ ဗိသုကာ၊ အနုပညာ၊ သုတ-ရသစကားပြေရေးဖွဲ့ဖူးတဲ့ အာခီတက်တွေရှိ တယ်။ ဦးကျော်မင်း ၊ ဦမျိုးမြင့်စိန်၊ ဒေါက်တာမောင်ကျော်၊ ဒေါက်တာလွင်အောင်၊ ဦးရွှေ၊ ညွှန့်ဝင်းလေး . . .(ဦး) ခင်မောင်ရင်ကတော့ လိုင်းစုံတယ်။ ပန်းချီဆရာ၊ စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ၊ ပန်းချီဆွဲတဲ့အာခီတက်တွေရှိသေးရဲ့၊ (ဦး)ကြည်တွဲ၊ (ဦးတင်မြတ်) (ဦး)မျိုးညွှန့်၊ (ဦး)လှသိန်းစတာတွေ။ ကမ္ဘာကျာ် မိုက်ကယ်အိန်ဂျယ်လိုဟာ ပန်းချီ ဆွဲ၊ ပန်းပုထုတဲ့ဗိသုကာ။ မော်ဒန်ဗိသုကာ ရှေ့ဆောင်ကြီး လီကော်ဗျူးဆေး (Le Codusier) က ပန်းချီဆရာ ဘဝကလာတာ၊။ ပို့စ်မော်ဒန် ဗိသုကာရှေ့ဆောင်ကြီး အီဆိုဇာကီဆို ကဗျာဆရာသာမက ပရောဟိတ်ဟော ဆရာလေးဖြစ်လိုက်သေး။ မော်ဒန်ဗိသုကာ ရှေ့ဆောင်ကြီး ဖရင့်လွိုက်ရိုက် (Frenk Lyad Wright) ၊ တိုကျို အခြေစိုက် အာခီတက်ဒီဇိုင်နာ Azby Browm တို့တတွေသည် စာတွေဘာတွေရေးလိုက်သေး။
လူတွေက အိမ်ထဲမှာနေကြပြီ လူများစုဟာ အာခီတက်နဲ့ ဝေးနေကြပါသေးတယ်။
သူငယ်ချင်း . . . .
တို့များရဲ့ ဇာတိချက်ကြွေ၊ မွေးရပ်မြေ ရွှေတောင်ကလာတဲ့ “ဦး”တစ်ယောက်နဲ့ဆုံဖြစ်ကြ၊ စကားပြော ဖြစ်ကြတယ်။ သူက အသက် ၆ဝ ဝန်းကျင်၊ အတန်းပညာ ရှေးမက်ထရစ်လောက်ရောက်ခဲ့မယ်။ အဲဒီ “ဦး” ဟာ Architectဆိုတာ မကြားဖူးဘူး။ စက်မှုတက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရရင် “အင်ဂျင်နီယာ” လို့ပဲ သိထားတယ်။ ဒါခဏထား။ ဖြေသာသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားက စိုက်ပျိုးရေးပါရဂူ (ဒေါက်တာ) ဘွဲ့ရ စို်က်ပျိုးရေးပညာရှင်ကြီး တစ်ဦးနှင့် အလုပ် တစ်ခုလုပ်ရင်း ရင်းနှီးဖူးတယ်။ သူငယ်ချင်း သူကငါ့ကို “အာခီတက်” လို့ပြောတယ်။ အဲဒီလို ပညာရှင်အဆင့်က တောင် အသံထွက်မှန်အောင်မထွက်တတ်သေးရင်။
“အာခီတက်” လို့ ဘယ်သူ့ကို ခေါ်မလဲ။ ပန်းချီဆရာလား၊ မဟုတ်ဘူး။
လက်သမားဆရာကိုလား၊ ပိုလို့ မဟုတ်ဘူး။
အင်ဂျင်နီယာကိုလား၊ နီးစပ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး။
ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက်တဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာ ဗိသုကာကိုလား၊ မဟုတ်ဘူး။ အာခီတက် (Architect) သက်သက်ကိုပဲ အာခီတက်လို့ခေါ်တယ်။
တောရွာမှာ ဘယ်မှာအာခီတက်ရှိမှာလဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ရင် ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီး၊ ဒါမှမ ဟုတ်၊ အိမ်ဆောက်ရင် အိမ်ရှင်။ လက်သမား ပန်းရံဆရာနှင့် တိုင်ပင်ပြီးတွယ်လိုက်ကြတာပဲ။ ဆောက်လိုက်ကြ တာပဲ။ အိမ်ရှင်+လက်သမား+ပန်းရံဆရာ = ဗိသုကာ။ အိမ်ဖြစ်သွားတာပဲ။ ကျောင်းဖြစ်သွားတာပဲ။ နေလို့ရ တာပဲ။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးပြကြီးဆိုတာလည်း တောရွာ၊ နယ်မြို့လေးတွေက စားကျက်ပြောင်းကြီးပွား လာသူတွေက အများသား။ ၆၀၊ ၇ဝ ကျော်တွေထဲမှာ ရန်ကုန်သားစစ်စစ်က အရှားသားလား။ မြေကိုသာ စွန့် ခွာသာ စွန့်ခွာခဲ့တာ အကျင့်စရိုက်၊ ဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကတော့ တောဓလေ့၊ တောစရိုက်၊ နယ်ဓလေ့၊ နယ် စရိုက်၊
မလွှဲသာလို့သာ (စည်ပင်ဥပဒေလွတ်ကင်းအောင်လို့သာ) အင်ဂျင်နီယာ (သို့မဟုတ်) အာခီတက်ကို ပုံစံဆွဲခိုင်းရတာ။ အိမ်ရှင် + လက်သမား (ပန်းရံ) ဆရာ = ဗိသုကာ ယဉ်ကျေးမှုကတော့ ဖက်တွယ်ထားဆဲ။
ကောင်းပြီ။ ဘယ်လိုဒီဇိုင်းမျိုးတွေ ပုံပေါ်လာမလဲ။ လေးတိုင်စင် ထောင်ပြီး အမိုးမိုး၊ အကာကာအခင်း ခင်းထားတဲ့ ကွန်ကရိ (သို့မဟုတ်) အုတ် (သို့မဟုတ်) ပျဉ်သေတ္တာကြီးတွေ ဖြစ်လာမယ်။ လူကတော့ “အိမ်”။ ဘုန်းကြီးနေတော့ “ကျောင်း” ပေါ့။
“အာခီတက်” ဆိုတာ ဘာမျှမဟုတ်။
လူထဲက လူဘာပဲ။ ဗိသုကာဝိညာဉ် ပူးကပ်နေတဲ့ သွေးသားခန္ဓာတစ်ခု။
မာစီဒီးကား၊ ရိုးလက်ခ်စ်နာရီ၊ အီတလီပီဘာထဲ၊ ဘရာဇီးကော်ဖီ၊ ဘလူးလေဘယ်အရက်၊ လောကီရဲ့ နတ်သုဒ္ဒါအားလုံးကို ကြိုက်တတ်တယ်။
လက်ဝှေ့နယ်ပယ်အသုံးနဲ့ပြောရင် “ကြိုးဝိုင်းဒိုင်” ၊ ဘောလုံးစကားနဲ့ပြောရရင် “ကွင်းလယ်ဒိုင်”၊ ဘိလိ ယက်လောကသားတေရဲ့အသုံးနဲ့ဆို “မာကာ” ၊ ဥပဒေစကားနဲ့ပြောရင် “တရားသူကြီး”။
သူငယ်ချင်း . . .
ပညာရှင်တွေလည်း သိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူတွေ အသီးသီးမှာ ပညာရှင်ကျင့်ဝတ် (Professional ethics) ဆိုပြီးရှိတယ်။ ဥပဒေပညာရှင်လည်း ဥပဒေပညာရှင်မို့၊ ဆရာဝန် လည်း ဆရာဝန်မို့၊ အင်ဂျင်နီယာမို့၊ တို့များ ဗိသုကာတွေမှာလည်း အဲဒီအဲသစ်ခ်ရှိတယ်။ ပညတ်တော်တွေ။ ကန်ထရိုက်တာမလုပ်ရဘူး။ မကြော်ငြာရဘူး စတာတွေထား။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ဆောက်လုပ်ရေး လောကမှ ပုံဆွဲရုံ၊ အာခီတက်မှ အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ရမယ်။ အာခီတက်မှ ကြီးကြပ်ရမယ်လို့ ဥပဒေသမရှိဘူး။ “အာခီတက်” ဆိုတာ ဘာမှန်းလဲသိပ်မသိကြဘူး။ (အရပ်အသိ) အင်ဂျင်နီယာ။ ပုံဆွဲအင်ဂျင်နီယာ၊ အရပ်အသိမှာ အင်ဂျင်နီယာတွေ ပုံစံဆွဲကြ၊ ကြီးကြပ်ကြ၊ ဆောက်လုပ်ကြ။ အဲဒီတော့ “အာခီတက်” ဟာ ကစားကွင်း ပျောက်နေတဲ့ ဘောလုံးသမားလို နေရာပျောက် နေတယ်။
“အာခီတက်” ဟာလူထဲက လူပဲဖြစ်သမို့။
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ပေါ်မှာ ဥရောပညစာ စားချင်တယ်။
အဲဒီအခါ ကြိုးဝိုင်းဒိုင်၊ ကွင်းလယ်ဒိုင်၊ မာကာ၊ တရားသူကြီးလို “အာခီတက်” စစ်စစ်လုပ်နေလို့ သိပ်မရတော့ဘူး။ ဒါထား။ အင်ဂျင်နီယာ၊ ကန်ထရိုက်တာ၊ ဒဲပလော့ပါ၊ (သို့မဟုတ်) အုတ်သဲကျောက်၊ ဘိလပ်မြေရောင်း၊ ကြွေပြားရောင်း၊ အခန်းဝယ်ရောင်း၊ ခြံမြေဝယ်ရောင်း။
တချို့က ပုံစံငယ်(Moedel) ကလေးတွေလုပ်ပေါ့။ တကယ်ကို မချွင်းမချန်ပြောရရင် မိုဒယ်လုပ်ခြင်းဟာ အာခီတက်ရဲ့ အလုပ်မဟုတ်။ Model makerရဲ့အလုပ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ လူနည်းနည်း ပင်ပန်းပေမယ့်၊ စိတ်မပင်ပန်း။ ဆောက်လုပ်ရေး (construction)လို ဘာပြဿနာမှမရှိ။ မိုဒယ်လ်အပ်ရင်စရံငွေ တစ်ဝက်။ အလုပ်ပြီးရင် ရော့ပတ္တမြား၊ ရော့နဂါး။
ကိုလှဒင်၊ ကိုကြည်စိုးတို့ဆိုတာ တကယ့်မိုဒယ်နဲ့လုပ်စားပြီး ကြီးပွားလာကြသူတွေ။ ဗိသုကာဆိုတာ “စင်” ရှိမှ ကလို့ရတဲ့ သဘင်သည်မျိုးပါ။ အိုးထိန်းသည် ခဝါသည်၊ ဆတ္တာသည်နဲ့လည်း တူရဲ့။
နိုင်ငံတကာ ဗိသုကာစံနဲ့ ပြောရင်ဒီမှာ “ရှေ့ဆောင်” မရှိသေးဘူး။ နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင်တောင် တော်တော်ကြိုးစားရဦးမယ်။
ဗိသုကာဆိုတာ ဗိသုကာဘွဲ့ရရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး။
ဗိသုကာတစ်ယောက် ဗိသုကာ ဝမ်းစာတွေ ပြည့်နေရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ဒီဝမ်းစာ၊ အရည်အသွေး၊ စိတ်ကူး စိတ်သန်းတွေကို ခြယ်မှုန်းပြဖို့ အခါအခွင့်လည်း ရှိဦးမှ။
စက္ကူပေါ် ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဆွဲလိုက်တဲ့ ဆွဲပုံနဲ့ စကေးကိုက်သုံးဖက်မြင် ရုပ်ကြွ မိုဒယ်လ်တွေဟာ ဗိသုကာလက်ရာမဟုတ်သေးဘူး။ မီဒီယာအဆင့်ပဲ။ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တဲ့ အဆင့်ပဲ။ မြေပေါ် (ရေပေါ် ) ဆောက်ချလိုက်မှ ဒါ ဗိသုကာလက်ရာ။
ဗိသုကာလက်ရာနဲ့ ပန်းချီ၊ ပန်းပုလက်ရာ ဒီနေရာမှာကွဲပြားတာပဲ။ စက္ကူပေါ် (ကင်းဗတ်ပေါ် ) ဆေး စက်ချဆွဲလိုက်ရင် ပန်းချီ၊ ဒြပ်ထု (သစ်သား၊ ဖယောင်း၊ ကြေး၊ ပလာစတာ၊ . . .) တစ်ခုခုကို ထုဆစ်လိုက်ရင် ပန်းပု။
အခြေအနေအချိန်အခါကလည်း ပေးဦးမှ။ အပ်နှံသူ (Client ) လည်းရှိဦးမှ။ ငွေကြေးလည်း ပြည့်စုံဦးမှ။ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း၊ နည်းပညာလည်း လိုသလိုရဦးမှ။ တကယ်တော့ ဗိသုကာတစ်ယောက်ရဲ့ ဗိသုကာ လက်ရာပြသခွင့်ဟာ စင်ရှိမှတင်ခွင့်ရှိတဲ့ သဘင်သည်ရဲ့ဘဝမျိုးပေါ့ သူငယ်ချင်း။
ဗိသုကာတစ်ဦး ဒီပညာကို သင်ယူလေ့လာ လိုက်စားလာတာ မိမိအတွက် (မိမိ နေထိုင်မှု အဆင်ပြေဖို့၊ မိမိသက်တောင့်သက်သာ) ရှိဖို့၊ မိမိနေအိမ်လှပစေဖို့၊ တင့်တယ်စေဖို့) မဟုတ်ပါ။
အိုးထိန်းသည်ဟာ သူသာအိုးပဲ့အိုးရွဲ့နဲ့သုံးချင်သုံးမယ်။ သူများသုံးဖို့အိုးကိုတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ လုပ်သလို။
ခဝါသည်ဟာ သူ့အဝတ်သာ ညစ်ထေးချင်ညစ်ထေးမယ်။ သူများအဝတ်ကိုတော့ အဖွေးဆုံးဖြစ်အောင် လျှော်ဖွပ်သလို။
ဆတ္တာသည်ဟာ သူ့ဆံပင်တွေသာရှုပ်ပွနေချင်နေမယ်၊ သူများဆံပင်ကိုတော့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပြင်ပေး လိုက်သလို။
တို့ ဗိသုကာတစ်တွေက ကိုယ်သာယိုင်နဲ့နဲ့ အိမ်ကလေးနဲ့ နေချင်နေရမယ်။ သူများအိမ် (အဆောက်အ အုံ၊ အခန်း၊ ရုံး . . .) ကိုတော့ နေချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံးတွေကို တစ်လှေကြီးပေးဆပ်ချင်ကြတာ သူငယ်ချင်းရေ။
လိပ်မကြီးဟာ သဲသောင်စပ်မှာ ကျင်းတူး၊ လိပ်ဥကလေးတွေ ဥခဲ့ပြီး၊ ဟိုးခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ မေတ္တာ၊ မေတ္တာလှိုင်းတွေ လွှတ်ပေးနေသလိုမျိုး။ ဗိသုကာတွေဟာလည်း (လက်သမား၊ ပန်းရံတွေလို ကိုယ်တိုင်လုပ်စ ရာမလိုပေမယ့်) သူ့ရဲ့လက်ရာလေး ပီပြင်စေဖို့ မလှမ်းမကမ်းကနေ မေတ္တာဓာတ်ကြီးနဲ့ ကြီးကြပ်နေကြတာ။
တကယ်တော့ . . .
ဆောက်လုပ်ရေးလောကပင်လယ်ကြီးထဲမှာ ရေစက်ဆုံစည်းလာကြတဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ကန်ထရိုက် တာ၊ ဒဲပလော့ပါတွေ၊ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ သံချည်သံကွေး၊ ရေပန့်၊ လျှပ်စစ်ဆရာတွေဟာ စီးပွားပြိုင်ဖက် ရန်သူ တွေမဟုတ်ပါဘူး။ အမေမတူဘဲ မွေးလာပြီး နို့စို့ဖက်ဖြစ်လာသူတွေပါ။
ဗိသုကာတစ်ယောက်ဘွဲ့ရခြင်းဟာ ဗိသုကာဘွဲ့ရရှိခြင်းသာဖြစ်ပြီး၊ ဗိသုကာပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်ဖို့တော့ သူ့မှာ ပြစရာလက်ရာတွေရှိဖို့ လိုလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ပြစရာလက်ရာမရှိတဲ့ဗိသုကာ (ကိုယ်ပိုင်သီ ချင်းမရှိဘဲ) သူများသီချင်းကို ပြန်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးတဲ့အဆိုကျော်နဲ့ တူမနေဖူးလား။ ပန်းချီဆရာလည်းဆိုသေး၊ ပန်းချီကားလေးတစ်ကားလောက်တော့ (အနည်းဆုံး) ပြစရာရှိရမပေါ့။ တချို့က ဗိသုကာဘွဲ့တော့မရပါဘူး။ လက်စွမ်းပြရာလက်ရာတွေ ပြောင်မြောက်လွန်းလို့ လီကော်ဗျုးဆေးတို့လို ကမ္ဘာကျော်တောင် ရှိသေးရဲ့။
စကားလုံး၊ ဆေးစက်၊ ရုပ်ထု၊ သံစဉ်လှိုင်း၊ အနုသုခလက်ရာတွေလိုပဲ။ ဗိသုကာလက်ရာဟာ လူမျိုးတစ် မျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာပြလျက်။
ထုံးဖြူဖြုသုတ်ထားတိုင်း စေတီမဟုတ်။ အဆောက်အအုံတိုင်းကို ဗိသုကာလက်ရာလို့ ကမည်းမတင် သင့်သလို၊ ဗိသုကာလက်ရာတိုင်းဟာလည်း အဆောက်အအုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။
အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ ( ) ကို ကြည့်ချင်ရင်၊ ဘယ်မှမသွားနဲ့ ဗိသုကာလက်ရာကိုကြည့်။
ဗိသုကာလက်ရာဆိုတာ (တောဘုန်းကြီးကျောင်းသား အသိကလေးနဲ့ပြောပြောနေတဲ့) အလှသက် သက် အနုထည်တစ်ခုမှ မဟုတ်ဘူး။
စကားပြောခြင်းဟာ ရှေ့နေရဲ့အလုပ်။ စာရေးသားခြင်းဟာ စာရေးဆရာအလုပ်။ ဗိသုကာရဲ့အလုပ်က တော့ ဗိသုကာလက်ရာသန့်သန့်တွေ ထားခဲ့ဖို့ပါပဲ။ဗိသုကာတွေဟာ သံသရာခရီးသည်တွေလေ။ နက်ဖြန်သန် ဘက်ခါဆို သွားကြတော့မှာ လက်ရာတွေပဲကျန်ခဲ့မှာ။
၂၁ ရာစုဗိသုကာလက်ရာဟန် ရေစီးကြောင်းကို ဘယ်လိုဟောကိန်းထုတ်ကြည့်မလဲ။
ဗိသုကာပညာရပ်ဟာ သုညမှာဆိတ်သုဉ်းသွားပြီး၊ ဗိသုကာမျိုးဆက်သစ်တုံးသွားရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။
အာခီတက်ချာ ( ) ကို ဗိသုကာပညာ၊ လက်ရာ၊ လက်ရာဟန်ကိုဆိုကြတယ်။
လူတစ်မျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ နည်းပညာထွန်းကားခဲ့ပုံတွေကို ကြည့်ချင်ရင် ဂန္တဝင်မြောက်ဗိသုကာလက်ရာ တွေမှာ အထင်းသားအလွယ်တကူတွေ့ရတယ်။ ဒီဂန္တဝင်ဗိသုကာလက်ရာတွေဟာ ခေတ်ဗိသုကာတွေရဲ့ မြင်ဆ ရာလက်စွမ်းရှိ ရှေးဗိသုကာကြီးတွေကတော့ ခေတ်ဗိသုကာတွေရဲ့ဖခင် (သို့မဟုတ် အဆိုး အသေး)။
ခုခေတ် ရိုးရာမြန်မာ့ ဗိသုကာလက်ရာကိုပြောပြော။
မော်ဒန်၊ ပို့စ်မော်ဒန်၊ ဒုတိယ စက်မှုအလှဗေဒ၊ (Second Machine aesthetic) တွေကိုဆိုဆို။ ဂန္တဝင် ၊ ရိုးရာဝမ်းကြာတိုက်ထဲမှာ သန္တေတည်၊ နည်းပညာသစ်၊ စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ ပေါင်းဖွဲ့လိုက်မှ ခေတ်ပြိုင်ဗိသုကာ လက်ရာ ဖြစ်လာခြင်းပင်မဟုတ်ပါလား။
ထင်းရှူးသေတ္တာဖုံး အပေါက်ဖောက်ထားသလို၊ ဆောက်ထားတဲ့ကန်ထရိုက်တာ တော်တော်များများ ဟာလည်း ဗိသုကာလက်ရာမှမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲထင်ပါရဲ့ ။ တချို့ကတိုက်ဆောက်တာ ဗိသုကာမလို ဘူး။ ဗိသုကာကိုအပ်ရင် အပိုပိုက်ဆံကုန်တယ်လို့ဆိုကြပြန်တယ်။
ကောင်းပြီ ဗိသုကာမရှိရင် ဘာဖြစ်မလဲ။
တောရွာဓလေ့ကို အိမ်ရှင်+လက်သမား (ပန်းရံ)= ဗိသုကာယဉ်ကျေးမှု။ (သို့မဟုတ်) မြို့လယ်မှာလို ကန်ထရိုက်တာ+လက်သမား (ပန်းရံ) ဗိသုကာ။ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာဦးလူသားတွေလို ရာသီဥတုနဲ့သားရဲတိရ စ္ဆာန်ကာကွယ်ဖို့ ဂူအောင်းနေ။ ဗိသုကာလက်ရာဟာ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်၊ အလှသက်သက်၊ ရူးသွပ်မှုမ ဟုတ်ဘူးဆိုတာကို အာခီတက်၊ ဒီဇိုင်းနာ၊ စာရေးဆရာ Azby Brown က
သရီးစီ (Three C) လို့ဆိုပါတယ်။
တချို့က ဗိ်သုကာလက်ရာဆိုတာ အဆောက်အအုံပဲလို့နားလည်ထားကြပြန်တယ်။ စားပွဲတင်နာရီ၊ ပရိဘောဂအစ မြို့ကြီးပြကြီးအဆုံး ဗိသုကာလက်ရာ အမျိုးမျိုးရှိတယ် သူငယ်ချင်း . . .
ဒါဆို ဆရာဒေါက်တာ လွင်အောင် (ဗိသုကာ) က ဒီလိုခွဲခြားပြပြန်တယ်။
ဗိသုကာတွေကို တခြားသူတွေနည်းတူ နှစ်ဆယ်ရာစုကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုကို ကြိုဆိုရ တော့မယ်သူငယ်ချင်း။ နှစ်ဆယ်ရာစု ဗိသုကာလက်ရာဟန်များကို လေ့လာခြင်းဆိုပြီး ကျမ်းတစ်စောက်လောက် ပြုစုမှပြည့်စုံမှာမို့ အမြည်းသဘောနဲ့၊ မော်ဒန်၊ ပို့စ်မော်ဒန်၊ ဟိုင်းတက်စ် (High Tech) ၊ အဖွဲ့လိုက်စတိုင် (Corpo rate style)၊ အိပ်စပရက်ရှင်နစ်ဇင် (Exopressionisnm)၊ ဒီကွန်စထရပ်တင်ဗစ်ဇင် (Decon structivism )။
၂၁ ရာစုမှာ ဂန္တဝင်၊ ရိုးရာ၊ မော်ဒန်၊ ပို့စ်မော်ဒန်၊ ဟိုင်းတက်စ်တို့ကို အချိုးအစားကျနစွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဗဟုဝါဒနဲ့ ဗိသုကာလက်ရာက ကြိုးသစ်တွေတင်ဆက်ကြမယ် မျှော်မိပါရဲ့။
ပိုင်ရှင်၊ ကန်ထရိုက်တာ၊ ဒဲဗလော့ပါတချို့ဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ “ ဈေးဝယ် ” လို့ထင်ကြပြီး၊ ဗိသုကာ ကို “ ဈေးသည် ” လို့မြင်ကြတယ်။
ဒီမှာ ပိုင်ရှင်၊ ဗိသုကာသဘောတူညီမှုစံမရှိသေးဘူး။
၁၆/၁၉ ပုလဲမဂ္ဂဇင်းမှာ ဗိသုကာကြေး (Architet’s Fees) နဲ့ပက်သက်လို့ အကျယ်တဝင့်ရေးခဲ့ပြီးလို့ ဒီမှာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲ။
ငါ . . . ဗိသုကာဘွဲ့ရခါစက Architect ဖြစ်ပြီဆိုပြီး၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ် အတော်လေးကျေနပ်အားရ၊ ဘဝင် လေဟပ်ခဲ့တယ်။
ခုဘွဲ့ရပြီး ၁၆ နှစ်အကြာ ငါဟာဘာမျှမဟုတ်။ လက်သမား၊ ပန်းရံ၊ သံချီသံကွေး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဆရာ တွေကို ကိုဆူဆရာပင့်သလို သွားသွားပင့်နေရတဲ့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ လူကြမ်းမင်းသားကြီးပါလားဆိုတာ သဘောပေါက် လာမိတယ်။
အောက်တိုဘာ 30, 2017 နေ့
အိမ်မှာမွမ်းမံပြင်ဆင်တဲ့အခါ အိမ်တွင်းရုံးခန်းတွေကို လျစ်လျူရှုထားကြလေ့ရှိပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုထည့်သွင်းဖန်တီးတာ၊ အလုပ်နေရာဟောင်းလေးကို ဒီဇိုင်းအသစ်အဆန်းနဲ့ ပြောင်းလဲမွမ်း မံပြင်ဆင်တာတွေက အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်မှုဆုလာဘ်တွေအများအပြားကို ရရှိပိုင်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါ တယ်။ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အခါ ရံဖန်ရံခါမှလုပ်တာဖြစ်စေ၊ မကြာခဏလုပ်ရတာမျိုးမှာဖြစ်စေ အလုပ် နေရာလေးက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့နေရာလေးဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအလုပ်တွေပြီးစီး အောင်မြင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ သို့မဟုတ် အိမ်တွင်းရုံးခန်းလေးမှာ ရုံးခန်း ဆန်ဆန်အပြင်အဆင်တွေမနှစ်သက်ဘဲ ပေါ့ပါးပျော်ရွှင်ပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိရှိလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ စိတ်ကြိုက် အပြင်အဆင်လေးတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းလေးပြန်ထုတ်တာကနေ စတင်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်အတွက်ဘာကအရေးပါလဲ၊ အရေး ကြီးလဲ၊ ဘယ်အရာတွေကဦးစားပေးရမလဲဆိုတာတွေ အတိအကျဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင် မွမ်းမံဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဒါတွေကိုချိန်ထိုးပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။ အိမ်အတော်များများမှာ ရုံးခန်းသုံးဆုံလည်ထိုင်ခုံတွေ သိပ်ပြီးလိုအပ် လေ့မရှိပေမယ့် အိမ်မှာအလုပ်ယူလုပ်မယ့်သင့်အတွက်တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်အသုံးပြုမယ့် အဓိ ကပစ္စည်းတွေကိုစုစည်းထားရှိပါ။
ဆော့ကစားတတ်တဲ့ကလေးတွေ ရှိပါသလား။ ဒီနေရာကို ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့အတူ ဝေမျှသုံးစွဲနေရ ပါသလား။
– ဒီနေရာမှာ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေမှာလဲ။
သိပ်ကြာကြာမနေဘူးဆိုရင် ထိုင်ခုံထားစရာမလိုလောက်ဘဲ ထိုင်ခုံအတွက် စရိတ်ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ ကြာကြာထိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေလုပ်မှာဆိုရင်တော့ ထိုင်ခုံရှိမှဖြစ်မှာပါ။
– အိမ်မှာပဲ စီးပွားရေးလုပ်နေတာလား။
အခုချိန်မှာ စရိတ်ဘယ်လောက်သုံးနိုင်မလဲ။ အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လောက်စရိတ်ချန်ထားမလဲ။ စရိတ်ချွေတာမှု- ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း မီးဖိုချောင်သုံးဟင်းချက်မှုန့်ပုလင်းတွေတင်တဲ့ နံရံကပ်သစ်သားစင်မျိုး လေးရွေးချယ်ပါ။ တခါတည်းထည့်ပြီးဆင်ထားသလိုမျိုး အမြင်ရစေဖို့ နံရံကဆေးရောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရောင် ကို စင်မှာသုတ်ပေးပါ။
ဘယ်ဒီဇိုင်းကိုမဆို သန့်ရှင်းတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံပါ။ ဘယ်လိုပုံမျိုးဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်နေရင် ပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရှုပ်ပွနေတာတွေကို အမြဲအချိန်ယူရှင်းလင်းပေးပါ။
စရိတ်ချွေတာမှု- နံရံကို ခေတ်ဆန်ပြီး ပျစ်နှစ်တဲ့အရောင်ဆန်းလေးသုတ်ပေးတာက ငွေကုန်မများလှဘဲ အဆင့် အတန်းမြင့်တဲ့ပုံပေါ်စေပါတယ်။ ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့စရိတ်ထဲ သုတ်ဆေးကောင်းကောင်းဝယ်ဖို့ပါထည့်တွက်ထားပါ။ သင့်အတွက်နောင်တရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၃။ ဘာကိုထားရှိမလဲ၊ ဘာကိုရွှေ့ပစ်မလဲ၊ ဘာကိုပြောင်းလိုက်မလဲ။
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အိမ်တွင်းရုံးခန်းနေရာလေးကို တစ်ချက်လောက်ဝေ့ကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာကိုဖယ် ရှားမလဲ၊ ဘာကိုတော့ဖြင့်ဒီအတိုင်းထားမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ ပရိဘောဂတွေကိုဆက်ပြီးထားမယ်ဆို ရင် အသစ်ဝယ်လိုက်မလား၊ ရှိပြီးသားအဟောင်းကိုပဲ ဆေးပြန်သုတ်ပြီး အသစ်လိုပြန်လည်အသုံးချမလား။ အ သစ်ဝယ်တာထက် ရှိပြီးသားအဟောင်းကိုပဲပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး ဆေးပြန်သုတ်ရုံ၊ အရောင်တင်ရုံနဲ့ အကောင်း တိုင်းဆက်သုံးနိုင်ပြီး စရိတ်ချွေတာပြီးသားဖြစ်စေမှာပါ။
စရိတ်ချွေတာမှု- အဖြူရောင်ပြောင်စားပွဲခုံရဲ့ထောင့်စွန်းနေရာတွေမှာ ကြေးဝါရောင်အကွပ်လေးတွေတပ်ပြီးအ လှဆင်ပါ။ ကုန်မာဆိုင်ကနေ ရှေးဟောင်းပုံအံဆွဲဘုသီးလေးတွေရှာပြီး အံဆွဲမှာတပ်ဆင်ပေးပါ။
၄။ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကြိုတင်တွက်ထားပါ။
ပြင်ဆင်မွမ်းမံဖို့လိုတာတွေအတွက်ငွေထုတ်မသုံးခင်မှာပဲ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေကို စာရင်းပြုပြီး စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ဆထားပါ။ လိုချင်တာတွေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုကြိုမတွက်ထားခဲ့ဘဲ လိုတာတွေလိုက်ဝယ်၊ လိုက်ဝယ်ရင်း နောက်ဆုံးစာရင်းပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်မှ မျက်လုံးပြူး၊ မျက်ဆန်ပြူးသွား လောက်အောင် အဆမတန်သုံးမိသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကြိုပြီးတွက်ထားတဲ့အခါ စာရင်းထဲမှာတင် ပဲ မဖြစ်မနေလိုနေတာနဲ့ နောက်မှဝယ်ယူဖို့ချန်ထားနိုင်တဲ့အရာတွေကို ထင်ပေါ်စွာမြင်သာပြီး အတိုးအလျှော့ ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ စရိတ်ပိုပြီးမကုန်သွားစေလိုသူတွေအတွက် အွန်လိုင်းကနေ ကြိုတင်ရှာဖွေမှတ်ထားနိုင်တဲ့ အပြင် အကြံပြုချက်လေးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
– တကယ်လိုနေပြီး ငွေမတတ်နိုင်သေးတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးကို အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေsaveလုပ်ထားပါ။
– အလားတူပုံစံနဲ့ ပိုပြီးအဖိုးနှုန်းချိုသာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို အခြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်တွေမှာထပ်ရှာကြည့်ပါ။
– တပတ်ရစ်တွေပြန်ရောင်းတတ်တဲ့အရောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာလည်း ရှာဖွေကြည့်ပါ။
– အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတချို့နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ကာပြန်လည်အသုံးချပါ။
စရိတ်ချွေတာမှု- စားပွဲခုံဟောင်းတွေနဲ့ ထိုင်ခုံဟောင်းတွေကိုဆေးအဖြူသုတ်ပြီး မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ အပွင့် အခက်တွေပါတဲ့ စားပွဲခင်းကပ်ခွာမျိုးကပ်ပြီးခင်းပေးပါ။
၅။ အရေးပါတဲ့အရာတွေကို မြင်သာထင်သာရှိပါစေ။
အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့အလုပ်ခန်းမျိုးမှာ တောင့်တင်းပြောင်လက်နေတဲ့စားပွဲခုံ၊ သက် သောင့်သက်သာရှိစေမယ့်ထိုင်ခုံအပြင် စူးရှတောက်ပတဲ့နေပြောက်တွေကာပေးမယ့် ပြတင်းပေါက်လိုက် ကာတွေကလိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီး ဒါတွေအတွက်အရင်ဆုံးဂရုစိုက်ရွေးချယ်ပေးပါ။
စရိတ်ချွေတာမှု- အဝတ်လှန်းချိတ်ဟောင်းတွေ၊ ကလစ်ပါတဲ့စာရေးကတ်ပြားတွေအသုံးပြုပြီး အတိုအထွာစာ ရွက်စာတမ်းတွေကို နံရံမှာစနစ်တကျချိတ်ဆွဲပြသတဲ့နေရာလေးအြ
ဖစ် ငွေကုန်ခံစရာမလိုဘဲပြင်ဆင်ဖန်တီးနိုင် ပါတယ်။
၆။ ဘယ်အချိန်မှာချွေတာသုံးမလဲ၊ ဘယ်အချိန်ပုံအောသုံးမလဲ။
ချွေတာသင့်တဲ့အချိန်၊ ပုံအောသုံးရမယ့်အချိန်ကို သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံအောသုံးမှဖြစ်မယ့်အရာ တချို့ကိုချွေတာသုံးနိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတွေကနေမှ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံ စံမျိုးပုံဖော်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပရိဘောဂဆိုင်ကနံရံကပ်စင်အဖြူကို နံရံမှာထားရှိပြီးရင် နံရံကပ်စင်ရဲ့အကွက်တွေ ထဲမြင်နေရမယ့်နောက်က
နံရံနေရာတွေကို ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ဆေးရောင် ဒါမှမဟုတ် ဒီဇိုင်းဆင်ပါတဲ့အထည်စကို ကော်နဲ့ကပ်ကာ အသစ်အဆန်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။
ချွေတာရန်- စင်၊ စားပွဲ၊ ကော်ဇော၊ မီးအလှဆင်၊ ပြတင်းပေါက်လိုက်ကာ
ပုံအောရန်- ထိုင်ခုံ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်စပ်ပစ်္စည်း၊ အနုပညာလက်ရာများ
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတပုံတအောကြီးမဝယ်ခင်မှာ အမျိုးအစားတူခွဲစုပြီးထားရှိဖို့ စနစ်တကျသိမ်းဆည်း ထားနိုင်မယ့်ခြင်းတွေ၊ သေတ္တာပုံးတွေ ကြိုဝယ်ပါ။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့အလုပ်နေရာလေးကိုရစေမယ့်အပြင် ငွေ ကုန်သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းဖို့ ခြင်းတွေ၊ သေတ္တာပုံးတွေ အိမ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်လည်း အွန်လိုင်းမှာဈေးလျှော့ရောင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကနေ ရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၈။ နှစ်ယောက်စာ တနေရာတည်းပြင်ဆင်ပါ။
တစ်ယောက်ထက်မကဘဲ အတူလုပ်ကိုင်ရမယ့်သူရှိခဲ့ရင် တစ်နေရာတည်းမှာနှစ်ယောက်စာနေရာ ထားရှိပြင်ဆင်ရမှာပါ။ စားပွဲခုံနဲ့ထိုင်ခုံတွေလိုက်ဖက်ညီနေတာက ပိုမိုကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာပုံမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ပုံမှာပြထားသလိုမျိုး ဘေးချင်းကပ်ရော၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပုံစံပါ ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
စရိတ်ချွေတာမှု- နေရာကျဉ်းပေမယ့် တစ်နေရာတည်း နှစ်ယောက်စာခေါက်ချိုးညီပုံစံခင်းကျင်းမှုပုံစံကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာပိုပြီးစည်းစည်းလုံးလုံး ဖြစ်စေပါတယ်။ စာအုပ်စင်နဲ့အဝတ်ဘီရိုစင်ကို တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ခင်းကျင်းထားနိုင်ပါတယ်။
အိမ်မှာပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူတွေအနေနဲ့ အပ်နှံလာသူတွေကို အိမ်မှာချိန်းဆိုဧည့်ခံပြီး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိလာမှာပါ။ အိမ်မှာပဲလုပ်ငန်းလုပ်တာပဲဆိုပြီး လုပ်ငန်းခွင်အပြင်အဆင်ကို အကုန်အကျ မခံတော့ဘဲလျစ်လျူရှုလိုက်ရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာ အနည်းနဲ့အများထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အမြင်တင့်တယ်ပြီး ဂုဏ်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နေရာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိပ်ပြီးချွေတာတာမျိုးမလုပ်ဘဲ သင့်သလောက်သုံးစွဲပြီး ပြင်ဆင်မွမ်းမံသင့်ပါတယ်။ စရိတ်ချွေတာမှု- အရောင်ကိုသုံးရောင်ထက်ပိုပြီးအသုံးအပြုပါနဲ့။ အသုံးပြုမယ့်အရောင်သုံးရောင်ထဲမှာ တစ် ရောင်ကို မနုလွန်းမရင့်လွန်းတဲ့ကြားရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
၁၀။ အပင်နှင့်ပန်းများ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ပါ။
အခန်းတွေထဲမှာ အပင်လေးတွေ၊ ပန်းပင်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့အခါ အခန်းလေးကို ပိုပြီးလှပတင့်တယ်သွားစေသလို အခန်းတွင်းလေကိုလည်းသန့်စင်သွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခန်းထဲမှာ အပင်လေးတွေ၊ ပန်းအိုးလေးတွေအတွက် နေရာအနည်းငယ်ချန်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဈေးကိုရောက်ဖြစ်တဲ့အခါ ပန်းနည်းနည်းဝယ်လာခဲ့ပြီး ဖန်ခွက်လေးထဲထိုးကာ စားပွဲပေါ်တင်ထားလို့လည်းရပါတယ်။
Reff : Houzz
အောက်တိုဘာ 29, 2017 နေ့
ငွေကုန်သက်သာပြီး လှပတဲ့လေသာဆောင်လေးတစ်ခု ဖန်တီးခြင်း
ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးမှာ သေးငယ်တဲ့လေသာဆောင်ပါတဲ့တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးနဲ့ နေထိုင်နေရတဲ့ အတွက် ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလိုချင်တာက စာဖတ်သူတစ်ယောက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့လူနေမူ ဘဝမှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ ကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုလိုချင်တတ်ကြပါတယ်။ နောက်ပြီး အိမ် နေ ရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာဘယ်လိုဖန်တီးမူကိုမှမလုပ်တတ်ဘူးလို့လည်း ကျွန်မတို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ လေသာဆောင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် လေသာဆောင်ကအရမ်းကျဉ်းနေတဲ့အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့က လည်းမဖြစ်နိုင်လို့ အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ သေတ္တာဟောင်းတွေနဲ့ ပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ပရိဘောဂတွေကိုရှင်းထုတ်ပြီး လေ သာဆောင်မှာထားလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအပြင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့လေသာဆောင်က ပရိဘောဂ ဟောင်းတွေထားသိုတဲ့နေရာအဖြစ်နဲ့ နိဂုံးမချုပ်ရအောင် ငွေကုန်သက်သာပြီး ကောင်းမွန်တဲ့လေသာဆောင် လေးဖန်တီးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ညနေစောင်းလေးမှာ လေသာဆောင်မှာထိုင်ပြီးကော်ဖီသောက်ချင်တာ ဒါမှမဟုတ် ညဘက်တစ် ယောက်တည်းအေးဆေးနေချင်တဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူအနေနဲ့ အများကြီးတွေးတောနေစရာမလိုပါဘူး။ ခေါက် လို့ရတဲ့ထိုင်ခုံတွေနဲ့စားပွဲလေးရှိရင်ရပါပြီ။ ဒီခေါက်ထိုင်ခုံလေးတွေက အသုံးမပြုချင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း အ လွယ်တကူသိမ်းဆည်းလို့ရတဲ့အတွက် နေရာစားလည်းသက်သက်တဲ့အပြင် အေးဆေးတဲ့ အနားယူချိန်ကို ဖန် တီးနိုင်မှာပါ။
(၂) သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့အတွက် ကော်ဇောနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထိုင်တဲ့အခင်းကိုအသုံးပြုပါ။
အကြမ်းခံနိုင်တဲ့ကော်ဇောနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထိုင်တဲ့အခင်းတို့က နေရာစားသက်သာတဲ့အတွက် ရိုးရှင်း တဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းခံနိုင်တဲ့ကော်ဇောနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထိုင်တဲ့အခင်းတို့က လွယ်လင့်တ ကူပဲဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆီမှာရှိတဲ့သစ်သားနဲ့စင်ပြုလုပ်နိုင်သလို သစ်သားလက်ရန်းတန်းလည်းလုပ် ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ခွေးခြေပုလေးလည်းလုပ်နိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ကြမ်းပြင်ကိုလည်းအေးနေအောင်ပြုလုပ် ပေးနိုင်မှာပါ။ သစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အသုံးအဆောင်တွေက ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ကော်ဇော်၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်ချထိုင် တဲ့အခင်းတို့နဲ့ပနံသင့်ပါတယ်။
လက်ရန်းမှာအပင်ငယ်လေးတွေထားလိုက်ခြင်းက သင့်ရဲ့မြင်ကွင်းကိုအံ့ဩစရာကောင်းအောင်ဖန်တီး ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သင့်ရဲ့နှလုံးခုန်ခြင်းမှန်ကန်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအထောက်အကူပေးနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်း
လေသာဆောင်လေးမှာအချိန်ကုန်ဆုံးဖို့အတွက် ပရိဘောဂပစ္စည်းအပြည့်အစုံမလိုပါဘူး။ ရိုးရှင်းတဲ့ ခုံ တန်းရှည်လေးတွေကို တစ်ဖက်ဆီမှာတစ်ခုံစီချပြီး စိတ်နှလုံးပေါ့ပါးစေနိုင်တဲ့ တောက်ပတဲ့အရောင်သုံးထားတဲ့ အခင်းလေးတွေကို ခုံတန်းရှည်လေးတွေပေါ်မှာတင်ထားလိုက်ပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကော်ဖီခွက်တွေတင်လို့ရ နိုင်တဲ့ စားပွဲလေးတစ်လုံးပဲပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါပျော်ရွှင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
နွေရာသီရောက်လာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့လေသာဆောင်ကိုနေရောင်ခြဉ်ရောက်ရှိစေပါတယ်။ ဒီလိုကျ ရောက်လာတဲ့နေရောင်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ဆွဲလို့ရတဲ့ဝါးလိုက်ကာ ဒါမှမဟုတ် ကောက်ရိုးဖျာတွေကိုအသုံး ပြုနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ အပင်စိုက်ပျိုးထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာ လည်း ကြည့်လို့ကောင်းအောင်ချစ်စရာအိုးတွေနဲ့အလှဆင်နိုင်ပါသေးတယ်။ အခုလိုနည်းလမ်းလေးတွေကိုပြု လုပ်ပေးတာက ကျရောက်လာတဲ့နေရောင်ခြဉ်ကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သလို ဒီ့ထက်ပိုဆိုးပြီး အပူကျရောက် လာမှာကိုလည်းတားဆီးပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ နေရာသေးသေးလေးကိုကြည့်ကောင်းအောင်ဖန်တီးချင်တဲ့အခါမှာ စင်ကိုအလျားလိုက် ထားမလား၊ ဒေါင်လိုက်ထားမလား စဉ်းစားတတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့သင့်အနေနဲ့ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း နံရံထောင့်နားကနေရာလွတ် ဒါမှမဟုတ် ထောင့်တစ်နေရာရာမှာ ရိုးရှင်းတဲ့စင်လေးတစ်ခု အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်စိတ်ကြိုက်အကန့်အသတ်မရှိ အလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဝတ်ပုခက်တစ်ခုက တစ်ဖြောင့်ထဲဖြစ်နေတဲ့ခုံရှည်ထက် ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ ကြိုးလေးနဲ့ချည်ထားရုံနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအပေါ်စီးကကြည့်မြင်နိုင်ပြီး ညနေခင်းရဲ့မှော်ဆန်တဲ့အလှကိုခံစားနိုင် မှာပါ။
တကယ်လို့စာဖတ်သူမှာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့နိုင်ပြီး စိတ်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအနေနဲ့ပါ အ ရေးပါတဲ့လေသာဆောင်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင် အခုပဲ စာရေးသူပြောပြပေးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ လေသာ ဆောင်ကိုအလှဆင်လိုက်ပါ။ စာရေးသူပြောပြပေးတဲ့နည်းလမ်းအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့လဲ လေသာဆောင်ကို ကြည့်ကောင်းနေအောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။